China Kunze Kunze Kunobatsira Chinobvaruka Kupeta Ngoro Mugadziri uye Mutengesi Ruiyi
Kunze Kunze Kunobatsira Chinobvaruka Kupeta Ngoro
Yekutanga sarudzo yekushandisa mota Yekunze Kunze Kunze Utility Inowoneka Folding Cart, iri nyore, inoshanda uye inoshanda. kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
Nyore kutakura: inogona kuunganidzwa mumasekondi, hapana gungano rinodiwa! Inogona kupetwa muhombodo kuitira nyore kuchengetedza. Saizi diki, inokodzera kuisa muwadhiropu, madziro kana trunk yechero mota yakajairwa. Mota inodonha yekushandisa yakanakira zvekufambisa zvekutenga, kubuda kwemhuri kana sechigadzirwa trolley, inokodzera kufamba, kufamba, zororo, gadheni, paki, musasa, grocery, zoo, zviitiko zvemitambo yekunze kana kungo fambisa zvinhu.
Yekutanga sarudzo yekushandisa mota ye Kunze Kunze Kunobatsira Chinobvaruka Kupeta Ngoro, izvo zviri nyore, zvinoshanda uye zvinobudirira. kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
Zvimiro zvinosanganisira: anogadziriswa anobata kuitira nyore kutakurika, uye 2 mesh mukombe varidzi vanovimbisa chinwiwa chengetedzo
Yakanakisa kutakura-inokodzera kwazvo kutakura michina kuenda kunze kwemitambo zviitiko, makonzati, mapaki mafambiro, akakodzera chaizvo kushandiswa pamba. Ndokumbira utarise kuti haina kukodzera kutakura vana.
Push kana kudhonza:mabhatani anodzoserwa uye zvigadziriso zvekusunda-kudhonza zviripo pasarudzo yako. Yakakodzera kwazvo kushandiswa mubindu, kufambira mberi kwemhuri kana setirori yezvinhu, inokodzera kwazvo kuenda kumahombekombe, kudzika musasa, zviitiko zvemitambo yekunze uye chero chiitiko chaunofunga chakakodzera.
Inobviswa kanopi uye kumashure tswanda. Denga rinobviswa rinodzivirira zvinhu zvako kubva kunaya uye chero mwaranzi ye ultraviolet. Bhasiketi rekumashure rinoita kuti kuchengetedza kuve nyore.
Yakagadzirwa dhizaini:mota ina-mavhiri iyi ine mabhureki kumberi nekumashure kudzora kufamba kwayo painosundirwa kana kudhonzwa. Kureba kwese turera kunogona kusvika 44 inches (anenge 111.76 cm), zvichikubvumidza iwe kukweva tirera zvakanaka.
Kukurumidza kupeta uye kuchengetedza: compact design, yakapetwa kuita mini saizi, unogona kupeta neruoko rumwe; chengetedza nguva nenzvimbo, zviri nyore kutakura zvese zvaunoda mubindu.
Adjustable mubato: ine chinogadziriswa mubato, inogona kutenderera mushe zvinoenderana nezvinodiwa; mubato hauzowira pasi, uye kukwirira kuchavharwa nemajoini; hapana chikonzero chekushushikana nezve ngoro isingadzoreki.
Inotakurika, kuchengetedza nzvimbo: inogona kupetwa kuita compact dhizaini uye iiswe mune ino perekedza yekutakura kosi yekuchengetera mutangi remota kana kuchengetedza.
chinhu Kwete CW02
Mashoko Simbi uye 600D polyester
Saizi 67 × 41 × 46cm
Kukura kwekupeta 46 × 17cm
Kurongedza 1pc / bhegi
chinhu Kwete CW03
Kukura kwekupeta 76x30x20cm
Mucheka 600D oxford
Mashoko Simbi chubhu
♦ Detail kuratidza
Ichi chigadzirwa chinogona kushandiswa mune dzakawanda nguva dzekunze dzekuzorora, sekuenda kupaki kupikiniki, kuenda kunze kwekunze kunogona kushandiswa kutakura zvimwe zvekudya, mvura, zvekushandisa zvichingodaro. Enda kumunda kupenda, zororo, nezvimwewo zvinogona kushandiswa kurongedza zvinhu zvinodiwa, zviri nyore kushandisa Iyi ngoro yakakwana kune nzendo kuenda kumusika, paki, kumahombekombe, zviitiko zvemitambo, musasa, uye zvimwe zvakawanda!
Ichi chigadzirwa chiri nyore kuisa. Ndokumbira utarise kune yekuisikidza uye yekushandisa bhuku.
Wedzera tumira email ku sales@ruiyitools.com
Vatengi vanowanzo kuratidza kuti mashandisiro acho akanaka, mashandiro ari nyore, kumisikidza kuiswa uye mhando yepamusoro.
Iva anotevera mutengi kuongorora chinhu ichi.
Zita reRand Junmei
Kushanda Kunze Gungwa Kukwidza Musasa Kufamba
Zvadaro: Yakakwira Hunhu Kuisa Kugadzira mota ramp
PU Wheel, China PU Furo vhiri, Concrete chisanganiso Rori, Caster Wheel, China PU Wheel, China Kongiri Musanganiswa,